किन आउँछ अनुहारमा कालो पोतो ? | Hamro Doctor News
काठमाडौं, २८ असार । धेरैलाई अनुहारको छालामा कालो पोतो आएर हैरान भइरहेको हुन्छ । बिशेष गरेर महिलाहरुलाई गर्भअस्थाको बेलामा अलिबढी अनुहारमा कालो पोतो आउने गर्दछ ।
त्यसो त छालामा यस्तो खालाको दाग धब्वा सामान्य अवस्थामा पनि आउने गर्दछ । यस्तो खालको समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुने गर्दछ ।
पोतो आउनु भनेको प्राकृतिक छालाको विभिन्न स्थानमा फरक रङ देखा पर्नु हो । यो निम्तिनुमा छालाभित्र हुने मेलानिन नामक सेलको भूमिका हुन्छ ।
हाम्रो छालाको माथिल्लो तहको भित्रपट्टि (इपिड्रमिसको स्ट्राटम सेल तहमा) मेलानिन सेल बसेको हुन्छ । यो छालाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुने सेल हो । छालाको रङ कालो, गोरो या अरु हुनुमा मेलानिनकै भूमिका रहन्छ ।
मेलानिन, हेमोग्लोबिन र क्यारोटेनी सेलले छालाको रङ निर्धारण गर्छ । मुख्य काम मेलानिनकै हुन्छ । मेलानिन सेल आफ्नो स्थानबाट हलचल भएर बाहिर निस्किएपछि पोतो र तिलकोठीजस्ता दाग निम्तिन्छन् ।
छालाको रङ निर्धारण गर्न नभइ नहुने तर अस्थिर हुँदा छालाको रङ नै बिगारिदिने मेलानिन गाँजर (क्यारोट) रङ र कफी रङको हुन्छ ।
सेतो छाला भएका व्यक्तिमा गाँजर रङको मेलानिन बढी हुन्छ भने कालो छाला भएका व्यक्तिमा कफी रङको मेलानिन बढी हुन्छ ।
पोतो काला र राता दुई प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिमा भएको मेलानिनको रङअनुसार बाहिर पोतो देखिने गर्छ । तिलकोठी कालो र खैरो हुने गर्छ ।
निधार, ओठको माथिल्लो भाग, नाक र च्यापुमा कफी रङको पोतो देखिन्छ । च्युाडोवरिपरि र घाँटीमा कालो रङको देखिन्छ ।
छालाको पत्र जानु नै ठूलो गल्ती हो । पुरानो छाला फालेपछि नयाँ लेयर देखा पर्छ र यो निकै संवेदनशील हुन्छ । नयाँ लेयर विकसित हुन कम्तीमा २८ दिन लाग्छ ।
यो अवधिमा संवेदनशील छालामा घाम र फोहोरको असर बढी पर्न जान्छ ।
आफूलाई सुरक्षित गर्न नसकेपछि संवेदनशील छालामा झनै पोतोलगायतका समस्या बढी देखिने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले क्षणभरका लागि होइन, दीर्घकालका लागि समस्याको समाधान खोज्न मेलानिनलाई स्थिर राख्ने उपाय नै अपराउनु उत्तम हुन्छ । समस्याको समाधान पोतो र तिलकोठीजस्ता समस्या निम्तिन नदिन घामबाट जोगिने तथा सनप्रोटेक्सन क्रिम प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।
तर, समस्या निम्तिसकेको छ भने मेलानिनलाई आफ्नो लेयरमा स्थिर राख्न भिटामिन ‘सी’ सेवन गर्नुपर्छ ।
समस्या कम गराउँदै लैजान घामबाट जोगिनै पर्छ । घामका कारण समस्या फैलिँदै जान्छ । त्यसैले बाहिर निस्किँदा छाता ओढ्ने, टोपी र सनग्लास लगाउने गर्नुपर्छ ।
घरभित्र बस्दा र बाहिर जाँदा सनप्रोटेक्सन क्रिम लगाउनै पर्छ । कोठाभित्र पनि अल्ट्राभाइलेट रे छिर्ने भएकाले मेलानिनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तर, सनप्रोटेक्सन क्रिम वातावरीण अवस्था र छालाको प्रकृतिअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ ।
स्किन प्रोफेसनलसँगको परामर्शमा समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ । पोतो, कोठी आउनुमा तनावले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले तनावमुक्त हुनैपर्छ । छालामा पानीको ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ । यसका लागि हाइड्रेसन टोनिक लगाउनुपर्छ ।
रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । असन्तुलित रक्तचापले मेलानिनलाई अस्थिर बनाइदिएर पोतो निम्त्याउन सहयोग गर्छ । ह्वाइटिनिङ क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले भित्र भएको मेलानिनलाई स्थिर राख्ने र छालाबाहिर निस्किएको मेलानिनलाई उडाइदिने काम गर्छ ।
१. छालामा पोतो निम्तिने मुख्य कारण घाम नै हो । घामको अल्ट्राभाइलेट किरण मेलानिनसम्म पुगेपछि मेलानिन अस्थिर बन्न पुग्छ । आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निस्किन्छ र छालामा यस्ता समस्या निम्तिन्छन् । समस्याको ९० प्रतिशत कारण घाम नै हो । १० प्रतिशत अन्य शारीरिक कारणले पनि हुने गर्छ । ४०–५० वर्षको उमेरमा सनस्पोट देखिने समस्या पनि आउँछ । यो उमेरमा आउने सनस्पोट सुरुमा कफी रङको हुँदै पछि कालोमा परिवर्तन हुन्छ । संवेदनशील छालामा बढी समस्या देखिन्छ ।
Last modified on 2019-07-13 17:06:55